चलचित्र क्षेत्रमा किन भइरहन्छ झगडा ? - Khabarpashchimeli
आजः ६ आश्विन २०७८, बुधबार
चलचित्र क्षेत्रमा किन भइरहन्छ झगडा ?
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र उद्योगमा बाक्लै रुपमा चलचित्रकर्मीहरुबीच मनमुटाव भइरहन्छ । कति घटना सतहमै देखिन्छन् भने कति त सञ्चारमाध्यमसम्म आइपुग्दैनन् ।
केही समयअगाडि भुवन केसी र साम्राज्ञी आरएल राणाबीचको झगडा सामाजिक सन्जालमा मात्रै सीमित रहेन । सामाजिक सन्जालमा चलेको दोहोरी उत्कर्षमा पुग्दा ‘केस’ अदालतमै पुग्यो । चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्काका अनुसार उक्त मुद्दा कोभिड–१९ को प्रकोपले अदालतको काम(कारबाही पूणर् रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
साम्राज्ञी र भुवनको मुद्दा टुङ्गो नलाग्दै नायिका पूजा शर्मा र पत्रकार प्रकाश सुवेदीबीच पुनः जुहारी सुरु भयो । बडी सेमिङ तथा बौद्धिकतामा प्रश्न चिह्‍न उठाएको भन्दै पूजाले चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था मात्रै गुहारिनन् महिला आयोगसम्म पुगिन् । अदालत जाने तयारी गरिरहेका बेला प्रकाश कार्यरत टेलिभिजनको व्यवस्थापकको अग्रसरतामा कुरा टुङ्गियो । यही वर्ष दीपाश्री निरौलाले ‘महानायक’का विषयमा दिएको अभिव्यक्ति चलचित्र क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहेन । चलचित्र क्षेत्रको चौघेरो पार गरेर ठूलै विवाद र बहस भयो । त्यसको असर अहिले ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ र ‘छक्का पञ्जा’ युनिटसँग जोडिन आइपुगेको छ ।
पूजा र प्रकाशबीचको उजुरबाजुर चलिरहेकैबेला पूजा शर्माविरुद्ध नायिका सुष्मा कार्की कलाकार संघमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेकी थिइन् । पूजाले नक्कली फेसबुक आईडी बनाएर सामाजिक सन्जालमा आफूलाई गाली गरेको उनले बताउँदै आएकी थिइन् । सुष्मा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सन्जालमार्फत पूजाविरुद्ध बेलाबेलामा असन्तुष्टि पोखिरहन्छिन् । पूजा पनि बेलाबेला व्यङ्ग्यात्मक स्टाटस लेख्छिन् ।
चलचित्र कलाकार संघले प्रकाश र पूजाको विवाद मिलेपछि आफ्नो असन्तुष्टि छ भने आउनू भनेपछि सुष्मा आजसम्म संघमा गएकी छैनन् । “मैले प्रकाश र पूजाको घटना साम्य भएपछि आउनुस् । सकेसम्म आफैँ मिल्नुस् भनेको थिएँ । उहाँ आउँछु भन्नुहुन्थ्यो तर आउनु भएको छैन,” संघका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्का भन्छन् । पूजाविरुद्ध कलाकार संघ नगए पनि सुष्माले सीताराम गिरीविरुद्ध उजुरी गरिन् । सामाजिक सन्जालमार्फत आफ्नो अपमान गरेको भन्दै उनले गिरीविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन् । एक साताअगाडि सुष्माले दिएको उजुरीका आधारमा महानगरी प्रहरी वृत्त बानेश्वरले गिरीलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । आउँदा दिनमा गालीगलौज नगर्ने तथा यसअघि गरेका कमेन्ट डिलिट गर्न गिरी सहमत भएपछि दुई पक्षबीच कुरा मिलेको महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डीएसपी दक्षकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । सीताराम गिरी नायिका पूजा शर्माको समर्थक भएको प्रहरीको आशंका रहेको पनि बस्नेतले बताए ।
२०७६ र ०७७ साल चलचित्र उद्योगका लागि नफापेको कलाकार शिवहरि पौडेल बताउँछन् । “एकजुट भएर काम गरिहेका समूहहरुका नराम्रा खबर पनि यही वर्ष आयो । चलचित्रकर्मीहरुबीच झगडा र विवादको श्रृंखला पनि एकपछि अर्को यिनै दुई वर्ष चले । २०७६ र ०७७ साल चलचित्र उद्योगका लागि दशाको वर्ष रहेछ ।” चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष खड्का कोभिड(१९ का कारण काम गुमाएर बसेको फुर्सदमा झगडा बढेको बताउँछन् । काम नपाएर फुर्सदमा बसेकाबेला पुरानो रिस कोट्याएर विवाद सिर्जना गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
“पुरानो रिस फेर्न अनावश्यक विवाद र झगडा भइरहेको छ । यसको समूहगत असर के पर्छ र त्यसको असर कति समय आफैंलाई पनि पर्छ भन्ने थाहा छैन वा बुझ पचाएका कारण यस्ता घटना भइरहेका छन्,” रवीन्द्र भन्छन्, “यसबारे समयमै स्वयं कालकारहरु सचेत हुनुपर्छ । अन्यथा यसको असर अन्ततः चलचित्र जगत्लाई नै पर्ने हो, कलाकारलाई नै पर्ने हो ।” पटकपटक सामान्य विषयमा हुने विवाद र झगडाले समग्र चलचित्र उद्योग र कलाकारलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै नराम्रो हुने उनको बुझाइ छ । बाह्रखरी